मह खाँदाको आश्चर्यजनक फाइदाहरु जानिराखाैँ - ज्ञानविज्ञान
Don't Miss it किन टोक्छ सर्पले, कसरि बच्ने र टोकी हालेमा के गर्ने ?
Up Next बच्चालाई भातको माड खुवाउँदा अनेकौ फाइदा
चिसो फाल्न खसीको खुट्टाको सुप, यसरी बनाउन सकिन्छ
बनाउने विधि – आगोमा कुकर बसाल्नुहोस् र बटर राख्नुहोस् । – बटर हल्का तातेपछि ज्वानो पड्काउनुहोस् । – खसीको खुट्टा…
स्वस्थ्य रहनकालागि रामदेव आफैँचाहिँ के खान्छन् त ?
मानिसलाइ स्वस्थ रहनको लागि योगले मात्र पानी पुग्दैन । स्वास्थ रहनको लागि हामीले आफ्नु खानपानमा पानी बिशेस ध्यान दिनु पर्छ ।…